နှုတ်ဆက်လိုက်ပါ၏ အိုဘယ့်.. ရာဇ၀င်များရဲ့ သတို့သမီး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » နှုတ်ဆက်လိုက်ပါ၏ အိုဘယ့်.. ရာဇ၀င်များရဲ့ သတို့သမီး
နှုတ်ဆက်လိုက်ပါ၏ အိုဘယ့်.. ရာဇ၀င်များရဲ့ သတို့သမီး
Posted by စဆရ ကြီး on Aug 11, 2011 in Creative Writing, Drama, Essays.. | 13 comments
ငါဟာ မြန်မာပြည်ထဲက လူမျိုးနွယ်စုတွေထဲက လူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် ငါဟာလဲ မြန်မာပါပဲ။ ဒုဋ္ဌ၀တီနဲ့ ကြီးပြင်းလာရပေမယ့်လည်း သူ့ရဲ့အရှင်သခင် ဧရာဝတီကို ငါမြတ်နိုးတယ်။ ငါ့သမိုင်းမှာ ဧရာဝတီဟာ မှတ်သားလောက်စရာ ကျေးဇူးမပြုခဲ့ပေမယ့်လည်း မြန်မာနိုင်ငံ အဓွန့်ရှည်နေခဲ့ဖို့ အဓိကအကျဆုံး သမိုင်းတွေကို ဖန်တီးခဲ့လို့ ငါလေးစားတယ်။ သူစီးဆင်းနေခဲ့တဲ့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စပါးကျီ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရတဲ့အတွက်လည်း ငါကျေးဇူးတင်တယ်။ ကမ္ဘာမှာ မြန်မာလို့ သိရှိစေနိုင်တဲ့ ဧရာဝတီလင်းပိုင်တွေကို ရင်ဝယ်ပိုက်ထွေး မွေးမြူစေခဲ့တဲ့ သင့်ကို ငါ ချစ်ခင်ပါပေတယ်။ နိုင်းမြစ်ကြီးလောက် မရှည်ပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အတွင်းအကျဆုံးအပိုင်းကနေ မျိုးချစ်စိတ် ထက်သန်စွာနဲ့ နှစ်ပေါင်း ထောင်သောင်းချီအောင် စီးဆင်းနေတဲ့ သင့်ကို ငါ ချီးကျူးတယ်။ မြစ်ဝါကြီးတော့ တိမ်ကောတော့မယ်။ သူ့လူမျိုးကတော့ ချစ်ကြပါရဲ့။ ခုတော့ ကယ်ဆယ်ဖို့ အသည်းအသန် လုပ်နေကြငဲ့။ အသင့်ကိုကား သင်၏နှလုံး၊ ပေါင်းဆုံခြင်းစတင်ရာ မြစ်ဆုံကိုမှ သူတို့… လုပ်ရက်လေခြင်း။ သူ့မြေ၊ သူ့ရေ၊ သူ့လူမျိုးကိုတော့ ချစ်ကြပါလေရဲ့။ ငါ့မြေ၊ ငါ့ရေ၊ ငါ့ဧရာဝတီကိုမှ ထိုလူမိုက်များ ရောင်းစားရက်လေသလား? ဒို့ပြေ(ပြည်)၊ ဒို့မြေကြီးသာ အလျှံငြီးငြီး ရောင်ဝါကြီးနဲ့ ထွန်းလင်းခဲ့မူ အသင်သည်လည်း နှစ်ထောင်းအားရ ရှိပေလိမ့်မူ။ ပျက်တစ်ခါ၊ မလာတစ်လှည့်နဲ့ ဒီမီးရောင်နဲ့ အသက်ရှင်နေတာ ကြာလှတဲ့ ဒို့လူမျိုးလည်း နေသားကျနေပါပြီ။ ကချင်ပြည်သူတွေလည်း ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ အလှပဆုံးပြယုဒ်ဖြစ်တဲ့ မြစ်ဆုံလေးကို ပျက်စီးစေလိုမှာတော့ မဟုတ်ပေဘူး။ ဒို့မြေကြီးလဲ (ကာတွန်းတစ်ခုကလိုဆိုရင်) အရင်းအမြစ်တွေ ပေါပါရဲ့၊ အပေါ်ပိုင်းတွေကတော့ ခုတ်ရောင်းလိုက်လို့ ကုန်ပါရော့လား။
အို… ဧရာဝတီ။ အသင်သည်ကား ခန့်ညားလှပေ၏။ ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာ ကောင်းလှပေ၏။ ရာဇ၀င်ထဲမှ အသင့်အား ဖျောက်ဖျက်ထားမရကုန်။ အသင်ရှင်သန်နေဆဲကာလတွင် မြန်မာလူမျိူးတိုင်း ပြောစမှတ်တွင်ခဲ့ရသလို အသင်မရှိတော့သော အခိုက်တွင်လည်း မြန်မာနှင့် အသင် ခွဲခြားလို့ မရနိုင်စကောင်းပေ။ ငါသည်ကား ကြီးမြတ်တော်ဝင်သော လူတန်းစား မဟုတ်သည့်အတွက်လည်းကောင်း၊ သူရဲကောင်းတစ်ဦး မဟုတ်ခဲ့သည့်အတွက်လည်းကောင်း၊ သူ့ကျွန်ဘ၀မှ မလွတ်မြောက်နိုင်သေးသည့်သူဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်လည်းကောင်း၊ အသင့်အား ဒီနေရာမှပင် နှုတ်ဆက်လိုက်ရပါသည်။
နောင်တစ်ကြိမ် အသင်စတင် စီးဆင်းလိုလျင် လွတ်လပ်မှုအပေါင်း ပြည့်စုံညောင်းသည့် တိုင်းပြည်ရပ်ရွာတွင်လည်းကောင်း၊ အသင့်အား ချစ်ခင်မြတ်နိုး လေးစားတန်ဖိုးထားသည့် အုပ်ချုပ်သူလူတန်းစားရှိရာ တိုင်းပြည်ရပ်ရွာတွင်လည်းကောင်း၊ အသင်၏ ဖြစ်တည်မှုကို ဂုဏ်ယူနေမည့် လူအများရှိရာအရပ်တွင်လည်းကောင်း သာယာငြိမ့်ညောင်းစွာ စီးဆင်းနိုင်ပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းများတောင်းလျက်
ဧရာဝတီအကြောင်း ဖတ်ရတိုင်း မျက်ရည်ဝဲမိပါတယ်…။
forum မှာ ကို kai တင်ထားပေးတဲ့ ဆရာမောင်စိန်ဝင်း (ပုတီးကုန်း) ရဲ့ ကဗျာဖတ်ရတုန်းက တကြိမ်၊ အခုတကြိမ် မျက်ရည်ဝဲရပါတယ်…။
ကိုယ်ကပဲ ထိရှလွယ်တာလား…၊ ကိုယ့်ရဲ့ အသက်သွေးကြောကို လာရောက်ထိခိုက်လို့ပဲ နှလုံးသားမှာ နာကျင်တာလား…။ သေချာတာကတော့ ဖတ်မိတိုင်း ခံစားရပါတယ်…။
ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်သွားနိုင်မယ့် တနေ့ကို မမျှော်လင့်ရဲပေမယ့် မျှော်လင့်နေမိပါတယ်…။
တစ်ကယ်တော့ ဧရာဝတီဆိုတာ မြန်မာလူမျိုးတိုင်းရဲ့ နှလုံးသည်းပွတ်ပါပဲလေ..
မြစ်ဆုံကို 2004 တုန်းက ရောက်ဖူးတယ် … တစ်နေကုန်ထိုင်ကြည့်ခဲ့တာ … နွေရာသီမှာတောင် အေးမြနေတာပဲ … နောက်မမြင်ရတော့ဘူးဆိုတော့ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ် …
အသက်ပေါင်းများစွာ ချွေးသွေးရင်းဖြစ်တည်လာတဲ့ ဧရာဝတီ
အားလုံးကို မျှဝေပေးတဲ့ ဧရာဝတီ
ဖြစ်တည်လာတဲ့ နှစ်ပေါင်းချီ ဒို့ ဧရာဝတီ
နာဂစ်မုန်တိုင်း ၀င်နှောက်တဲ့အခါ တောင့်ခံနိုင်တဲ့ ဧရာဝတီ
အမေ မွေးကတည်းက ဧရာဝတီရဲ့ သံစဉ်ကိုအရင်ဆုံးကြား
ဧရာဝတီရဲ့ တန်ဖိုးကိုတော့ အခုမှဘဲနားလည်ရပါတော့တယ်။
မောင်စိန်ဝင်း(ပုတီးကုန်း) ရဲ့ စာပေဟောပြောပွဲ အသံဖိုင် နားထောင်တော့ စိတ်မကောင်းဘူး။
ဒီအကြောင်းတွေကို ကျုပ်လက်လှမ်းမှီသ၍ လူတွေကို လေ့လာ စကားစမြည်းပြောကြည့်ဘူးတယ်
အချို့အကြောင်းအရာတွေကို ပရင့်ထုပ်ပြီး ဖတ်ကြည့်စေဘူးတယ်
တစ်နည်းအားဖြင့် ကျုပ်တတ်နိုင်သလောက် အနီးကပ် လေ့လာကြည့်တာပေါ့နော
ကျုပ်ကဘဲအတွေးနက်သလား တိမ်သလား အူကြောင်ကြောင်ဖြစ်သလားမသိဘူး
အထူးသဖြင့် ဘာမှ နားမလည်တားတော့ ပြောရခပ်ခက်ခက်ဘဲ
ကိုယ့်ရဲ့မွေးရပ်မြေ ဘာဖြစ်လို့ ဘာဖြစ်မှန်းမသိကြဘူးလို့ ပြောရင်
ဒီလိုအကြောင်းအရာတွေကို အခြားအခြားသော သူတွေ
ကျုပ်တို့ ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲလို့ ဖောလ်ကြည့်တာ
ကျုပ်ပြောခဲ့ပြီးသလို ကျုပ်အရက်ဘိုးတွေကို ရင်းနှီးပြီး
ပရင့်ထုပ်ထားတဲ့စာအချို့ကို ဖြန့်ဝေတဲ့အပေါ်မှာ လူအချို့က
ကျုပ်က တတ်နိုင်သလောက် ကွင်းဆင်းထားပြီးပြီ
ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ဝမ်းနည်းပက်လက် ပဆိုးခြုံ အီးပေါက်ပြီး ကိုယ့်အီးကိုယ်ပြန်ရှုနေတတ်တဲ့
နိုင်ငံရေးပါတီ ဆိုတာဘာလဲ – နိုင်ငံ့အရေးကို ဆောင်ရွက်ဖို့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အဖွဲ့အစည်း မဟုတ်ဘူးလား၊
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဆိုတာဘာလဲ – ပြည်သူတွေရဲ့ အရေးကိစ္စတွေကို ပြည်သူတွေရဲ့ ကိုယ်စား လွှတ်တော်မှာ ပြောဆိုဆွေးနွေးနိုင်ဖို့ ပြည်သူတွေက ရွှေးချယ်ထားတဲ့ သူတွေမဟုတ်ဘူးလား၊
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဆိုတာဘယ်သူလဲ – ပြည်သူတွေက လေးစားတဲ့၊ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးကိစ္စတွေကို ကိုယ်ကျိုးစွန့်ပြီး ဆောင်ရွက်တဲ့၊ သန်း (၆၀) ကျော်တဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေကို Organize လုပ်နိုင်တဲ့၊ Lead လုပ်နိုင်တဲ့ အမျိုးသားခေါင်းဆောင် မဟုတ်ဘူးလား၊
ပြည်သူတွေဆိုတာ – မြန်မာ့မြေမှာနေ မြန်မာ့ရေကိုသောက် မြန်မာပြည် ဒုက္ခရောက်မယ့် အရေးကို ကာကွယ်ဖို့ တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေ မဟုတ်ဘူးလား၊
…ကျွန်တော်တို့ ဧရာဝတီကို ကာကွယ်ဖို့ ဘယ်လမ်းကြောင်းက သွားရင် အထိရောက်ဆုံးဖြစ်မယ် ဆိုတာ ရွေးချယ်ကြရပါမယ်။ …
“ရာဇဝင်များရဲ့ သတို့သမီး” – ထူးအိမ်သင်
ငါတို့ရဲ့ မိခင် ဧရာဝတီ)၃
ဂန္ထဝင်မြောက်တဲ့ အချစ်နဲ့ ကာကွယ်သူတို့ရဲ့ ဓားတွေ၊
ရာဇဝင် သစ်တို့ မွေးဖွားရာ
(ရာဇဝင်များရဲ့ သတို့သမီး….ငါတို့ရဲ့ မိခင် ……ဧရာဝတီ……..)
ခက်တာက ပြည်သူတွေအားလုံးကို အကြောက်တရားဆို ဘောင်ထဲမှာ အတင်းပုံစံခွက်သွင်းထားတာ နှစ် ၂၀ ကျော်ပါ။ စီပွားရေး ပညာရေးဖိနှိပ်ထားတော. အတွေးအခေါ်..ဗဟုသုတ အမြင်ဆိုတာတွေဝေးရော။ ဘာလုပ်လုပ် ဘာပြောပြော ဖမ်းမယ် ။ ထောင်ချမယ် ။ တောင်းဆိုရင် ပစ်မယ်ပေါ.။ စိတ်သာရှိပြီး ၇ုံးထဖို.အခွင်.မသာ၊ တောင်ဆိုဖို. မရဲနိုင်သေးတဲ. ပြည်သူတွေကို ..ပြည်သူတွေအတွက်ကောင်းဖို.လုပ်နေပါတယ်ဆိုတဲ. အဖွဲ.တိုင်းက ရှေ.ကထိရောက်တဲ. ဦးဆောင်မှုတွေ လုပ်ပြ လုပ်ပေးနိုင်မှ ၊ ပြည်သူကိုလဲ အခွင်.အရေးတွေ ကာကွယ်ပေးမှ ခဲမှန်ဖူးတဲ. စာသူငယ်ဘ၀ကနေ ၊ ကျားနာတစ်ကောင်လိုပြန် ဖြစ်လာမှာပေါ.။ ခုလဲ အားလုံးစိတ်ထဲမကောင်းနိုင်ကြပေမယ်. ..ပြည်သူ.အတွက်ပါလို.ပြောတဲ ဘယ်သူတွေ၊ ဘယ်အဖွဲ.အစည်းတွေက ကျနော်တို.လိုပြည်သူတွေရှေ.က သေချာဦးဆောင်ပြီး ဒီကိစ္စကို ထိရောက်တဲဆွေးနွေးတောင်းဆိုမှုတွေ ၊ ၇ပ်တန်.သွားဖို.တွေ လုပ်ကြလို.လဲ..။ တစ်ချို.ကတော. သေချာလိုက်လုပ်နေကြတဲ.သူတွေ တွေ.ရပါတယ်..ဒါပေမယ် ဒီကိစ္စ ဒီထက်ပိုတဲ. အင်အားစုနဲ.မှ ရင်ဆိုင်နိုင်မှာဆိုတာ သေချာ ကျနော်တို. သိသင်.နေပါပြီ..။ ( ၂ ခါရှုံးမှာစိုးလို. ၀မ်းနည်းပက်လက်ရော ၀မ်းနည်းမှောက်၇က်ရော မဖြစ်ပါ) …
ဘယ်လိုပင်ပြောပြော .. သူုတို့ လွန်ဆန်လို့ မရတဲ့ လူကြောင့် အများပြည်သူရဲ့မျက်နှာကို ကြည့်ပါ့ မလားလို့ ထင်မိတယ် .. သူတို့လဲ မသိတာမဟုတ် .. ဒါပေမယ့် စားထားတာ လက်လွန်နေပြီ .. လည်ချောင်းထဲက ပြန်ထွက်တော့မယ်
ဧရာဝတီနှင့် အတူ ပျောက်ကွယ်သွားမဲ့ ဘ၀ပေါင်းများစွာအတွက် ..၀မ်းနည်းမှုများစွာနဲ့ငိုကြွေးသံတွေ….
သူတို့တတွေ ကြားမှ ကြားနိုင်ပါလေစ…..